ZIDL'EKHAYA: ISundowns izoqedela umsebenzi kwiligi - Impempe
ZIDL’EKHAYA: ISundowns izoqedela umsebenzi kwiligi
May 24, 2021 Impempe.com
Ukuwina kweMamelodi Sundowns umdlalo olandelayo weDStv Premiership kuzosho ukuthi ikhala iyemuka nesicoco yize kuzobe kusasele imidlalo emithathu. ISundowns izogxila emidlalweni yeligi kulandela ukukhishwa kwayo kwiCAF Champions League ngempelasonto.
Izobhekana nomakhelwane bayo iSuperSport United eLoftus Stadium ngoLwesithathu ngo-5 ntambama. Nokho ngokusho komqeqeshi, uManqoba Mngqithi into ebalulekile kubona ukuthi baqoqe wonke amaphuzu asele ukuze bafeze lokho abazibekele khona.
“Sibeke imiqondo yethu emsebenzi olandelayo okuwukubhekana neSuperSport United. Uyabona ngisho siziqeqesha ukuthi abadlali bazimisele, wonke umuntu ubheke ukuthi afike alwe kulo mdlalo.
“ISundowns ayithandi ukuthi ingawini imidlalo emibili ilandelana, ngakho sinomsebenzi wokuthi sizame ukubuya ngokushesha,” kusho uMngqithi. Njengamanje iSundowns inamaphuzu angu-57 emidlalweni engu-26. Ukuwina umdlalo wangoLwesithathu kuzoyibeka kumaphuzu angu-60 bese iphakamisa nendebe yePremiership.
“Kuhlale kubalulekile kithi ukuthi sigxile kulokhu esisuke sizibekele khona. Ngokohlelo lwethu, lona ngumdlalo wesibili eqoqweni lemihlanu yokugcina futhi siwuwinile owokuqala. Esibheke ukukwenza ukuthi siqoqe amaphuzu ebesizibekele wona emidlalweni emine yokugcina.
“Kungenzeka ukuthi umdlalo weSuperSport ucacise ukuthi isicoco siya ngakuphi kodwa inhloso yethu amaphuzu. Njengamanje sishoda ngamaphuzu ayisishiyalolunye kodwa kungaba mnandi uma singathola awu-12, yilokho esikubhekayo.
“Asizami ukufaka ingcindezi kubadlali ukuthi babuke lo mdlalo njengozocacisa ngesicoco ngoba sifuna badlale ngokuzimisela nasemidlalweni emithathu yokugcina. Kubalulekile kithi ukuwina yonke imidlalo esiyidlalayo,” kucacisa uMngqithi.
Lo mqeqeshi wazi kahle ukuthi iSuperSport ngeke ibathambisele ngoLwesithathu yikho nje ethi kumele bazibambe ziqine kuyo yonke imidlalo esele. “ISuperSport ayihleli endaweni ekahle kwi-log kodwa into okumele siyiqaphele ukuthi iyiwinile imidlalo emithathu edlule.
“Bayabuya manje, bakhombisa izimpawu ezinhle. Bayiqembu elihle kakhulu futhi uBradley Gobler nguyena osahamba phambili ngokushaya amagoli. Leli qembu lishaya amagoli amaningi ngokuthola amabhola asuke egotshwe ezimpondweni.
“Banabadlali abaningi abakwazi ukushaya amagoli. Siyazi ukuthi asidlali neqembu elishayeka kalula futhi uRonwen Williams ubuyile ngakho babukeka njengeqembu eselivuke lazithintitha,” kuphetha uMngqithi.
Email: Editor@impempe.com Twitter: @impempe_com Facebook: Impempe SA
Previous Previous post: HHAYI LA KITHI: OweSuperSport uthi ayizame kwabanye ezovuka ngabo iSundowns
Next Next post: LISENETHINI!: Iyasihlaza lento yeRoyal AM neSekhukhune, kumele ixazululwe ngokushesha